Fananganan-tsaina volana febroary – MPTDN-ARTEC- PAOSITRA MALAGASY – Hiaraka hiasa sy hifampizara mba ho fampandrosoana ny Ministera sy ny Firenena
IREO FEPETRA NORAISIN’NY FITONDRAM-PANJAKANA
Notanterahana androany 03 febroary 2020 ny Fananganan-tsaina voalohany niarahan’ny Ministra RAMAHERIJAONA Andriamanohisoa sy ireo mpiara-miasa eto amin’ny Ministeran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra sy ny fambiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra ary ireo ratsa-mangaika.
Fotoana nahafahan’ny mpiasa eto amin’ny Ministera niarahaba ny Ministra amin’izao fanendrena azy izao sy nanamafy ny fahavononana hiara-hiasa sy hanatanteraka ireo soritr’asa napetraky ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA taminy.
“Manamarika zavatra lehibe ny andro anio satria voalohan’ny volana, fananganana ny Sainam-pirenena ary fanombohana ihany koa ny asa hiarahana eto amin’ny MPTDN. Mahafaly tokoa ny mahita anareo tonga maro sy manome toky sahady fa hiara-hiasa isika” hoy ny Ministra teo amin’ny fandraisam-pitenenany.
Nandritra ny famindram-pitantana izay notanterahina ny herinandro lasa teo dia nolazain’ny Andriamatoa Ministra ambagovangony ireo asa miandry ny Ministera. Asa mafy, ary mila tanterahina anatin’ny fotoana fohy, no nankinina amin’ny Ministra ka mila ny fiarahan’ny rehetra misalahy.
Nambarany fa adidiny voalohany ny hanentana, hitarika sy hifampizara traikefa amin’ny mpiasa rehetra eto anivon’ny Ministera sy ireo ratsa-mangaika mba hanatsarana ny asa sy hamitana ny asa voasoritra ho atao. Hojerena ny sampan-draharaha rehetra ary misokatra tanteraka amin’ny fifanakalozan-kevitra ny tenany mba hampandroso ny MPTDN.
Teo am-pamaranana dia nirary ny rehetra hahavita be amin’ny asa ny Ministra ary nanentana sahady ny rehetra ho tonga hiaraka hamboly hazo ny 14 febroary ho avy izao.
© MPTDN 2020